Dhageyso:-Shirweyne Ay Soo Qaban Qaabisay Wasaaradda Dastuurka Oo Ka Furmaya Magaalada Muqdisho | Faafan News
Wasiirka Wasaaaradda dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil,ayaa Warbaahinta u sheegay in shirkaas la qaban doono horanta bisha soo socota ee October,islamarkaana uu noqon doono mid wadatashi ah.
Waxa uu sheegay in shirkaas ay ka qeybgeli doonaan inta badan qeybaha kala duwan ee bulshada sida,dhalinyarada iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah,kuwaas oo ka kala imaanaya Maamul Goboleedyad dalka si dib u eegis loogu sameeyo dastuurka dalka.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Waaxyaha kala duwan ee dowladda ay ka qeybgeli doonaan,iyada uu furi doono ra’iisul Wasaare xsan Cali kheyre,soona xeri doono Madaxweyne Maxamed Cabdulalahi Farmaajo.
Wasaaradda dastuurka Soomaaliya ayaa horay Xarumaha Maamul goboleedyada wax ay ku qabatay shirar kala duwan oo looga tashanayay sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya.
Hoos Ka Dhageyso Codka Wasiirka Dastuurka